China BMC mpanamboatra sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
1. Natao manokana hanamafisana ny polyester tsy miangona, resin epoxy ary resins phenolika.
2.Wide ampiasaina amin'ny fitaterana, fananganana, elektronika, indostrian'ny simika ary indostrian'ny hazavana. Toy ny faritra moto, insulator ary boaty switch.
Ny kofehin-tsakafo E-Glass ho an'ny BMC dia natao manokana hanamafisana ny polyester tsy miangona, ny epoxy resin ary ny resins phenolika.
● Tsy fivadihana strand tsara
● Low static sy fuzz
● Fitsinjarana haingana sy mitovy amin'ny resina
● Toetra mekanika sy fanodinana tena tsara
Ny fitambarana famolavolana be dia be dia vita amin'ny alàlan'ny fampifangaroana kofehy voatetika, resina, mpameno, catalyst ary additives hafa, io fitambarana io dia zakain'ny famolavolana famatrarana na ny famolavolana tsindrona mba hamoronana ireo ampahany vita vita.
Ny kofehy vita amin'ny vera ho an'ny BMC dia be mpampiasa amin'ny fitaterana, ny fananganana, ny elektronika, ny indostrian'ny simika ary ny indostrian'ny hazavana. Toy ny faritra moto, insulator ary boaty switch.
Halavany mitetika, mm
Fandehanana tsara, tsy fivadihana strand avo
Low static, flowability tsara, tsy fivadihana strand avo
Fandehanana tsara, tsy fivadihana amin'ny kofehy avo, tanjaka avo
Tady voatetika tsy tapaka, na dia miparitaka aza mandritra ny fikorontanana, ny fihazonana ny halavan'ny tapa-kazo, ny vokatra mitambatra avo lenta, azo ampiasaina amin'ny fitambaran'ny kalitao avo lenta.
Filimetatra savaivony, μm
Filametran'ny savaivony (%)
Votoatin'ny hamandoana (%)
Votoatin'ny LOI (%)
Ny halavan'ny tety (mm)
Teo aloha: Tady voatetika ho an'ny thermoplastics
Manaraka: Fiberglass voatetika strand Mat Emulsion Binder